crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Lakulan: Ninka Jaceylkiisa awgeed baaskiil ugu socdaalay Aasiya ilaa Yurub | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka March 15, 2017	0 412 Views
Delhi (Himilonews) – Bishii January 22, sanadkii 1977, 24-jir lagu magacaabo P.K. Mahanandia ayaa safar dhulka ah bushkuleetti ‘Baaskiil’ uga baxay magaalada Delhi ee caasimadda India isaga oo ku tagaya magaalada Boras ee dalka Sweden – si uu ula jiro marwada uu ogaa inay tahay jeexiisa midig. Sheekadooda jaceyl ee cajiibka noqotay waxay noqotay mowduuca buuggii loogu iibsiga batay ee uu qoray qoraaga reer Sweden ee Per J. Andersson.
Previous: UNICEF: 2016 waa sanadkii ugu darnaa nolosha carruurta Syria.
Next: Jaziiradda Migingo – barta kalluumaysiga Harada Afrika ugu weyn ee Victoria